गाउँको माया नपाएकी झुप्रीलाई मिल्यो लाखौँ दर्शकको साथ – Khabarhouse
गाउँको माया नपाएकी झुप्रीलाई मिल्यो लाखौँ दर्शकको साथ
Khabar house | २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०३:३५ | Comments
काठमाडौं : झुप्री भण्डारीको पहिलो गीत सम्झी रुना’रुना सार्वजनिक भएसँगै धेरै द’र्शकको मन चि’रिएको छ । केही घण्टा अगाडि उनको गीत सडक मिडिय बाट सार्वजनिक भएको थियो । गीत सार्वजानिक भए सँगै दर्शकहरुले आफ्नो मत व्य’क्त गर्नु भएको छ । धेरै जसो दर्शकहरुले उनको गीत सुनेर आँसु भरेको कुरा व्यक्त गरेका छन् भने कतिपय दर्शकले उनलाई बधाई तथा शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् ।
दृ’ष्टिबिहीन झु’प्रीलाई यतिबेला मा’या गर्नको लागि जनसागर उर्लिएको छ । भोइस अफ नेपालमा आफ्नो प्रस्तुति दिदा कसैले पनि माया गर्दैन भनेर झुप्री भण्डारी रोएकी थिइन् र यतिबेला उनको पक्षमा लाखौँ शुभचिन्तक रहेका छन् । झुप्रीको स्वरमा रहेको नयाँ गीत ‘सम्झि रुना रुना’ बोलको म्युजिक भिडियो सडक मिडिया यु’ट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
उनले आफ्नो जीवनमा घटेको यथार्थ घटनामालाई गीतमा चित्रण गरेकी छ । गीतमा उनले पाएका दुख, कष्ठ,संघर्ष, पीडालाई उठान गरेको छ। दिन मलाई बर्षदिन जति, सम्झि रुना रुना, आमाले मारिनन् किन? मलाई हुना हुना, संसार देख्ने आँखा छैनन् , के गरेर गरेर खाउँला, पालिकन दु:ख भया, आमा म काँ जाउँला ? उक्त गीतमा कमल संघर्ष र गायिका झुप्रीको स्वयं शब्द रहेको छ भने पाण्डव बिष्टले संगीत दिएका छन् ।
उक्त गीतलाई माला श्री रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यस गितलाई विनाेद बाजुरेलीले एरेन्ज गरेका हुन्। भिडियोमा गायिका झुप्रीसंगै बलराम भण्डारी (बुवा),नामसरा भण्डारी (आमा),गायत्री भण्डारी,पवित्रा भण्डारी, यशोदा भण्डारी,कविता बादी, प्रकृति थापा रेखा थापा,शान्ती महरा लगायतका कलाकर्क्को अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई कमल संघर्ष र वरुण रिजालले निर्देशन गरेका छन् । भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।